China Model: QM32DUI-60HZ စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ပြီးပြည့်စုံသော display
ဒီ ၃၂ လက်မမော်နီတာတွင် 3840x2160 resolution ဖြင့်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးအသေးစိတ်ကျသောပုံရိပ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး HDR10 ပါဝင်မှုသည်မြင့်မားသောအရောင်အသွေးနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာပြင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာပေးစွမ်းသည်။ AMD FreeSync နည်းပညာနှင့် Nvidia Gsync တို့ကအလွယ်တကူချောမွေ့စွာကစားနိုင်စေရန်ပုံရိပ်မျက်ရည်များနှင့်လှုပ်ခတ်မှုများကိုလျှော့ချပေးသည်။ , အသုံးပြုသူများသည်တုန်ခါမှုကင်းသောအနိမ့်အပြာအလင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်မှတစ်ဆင့်ဂိမ်းကစားစဉ်အဆင်ပြေစွာကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Pixel ပိုများလာသည်။ 4K ဖြေရှင်းချက်ဖြင့်အသေးစိတ်ကြည်လင်ပြတ်သားသည့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်များကိုသင်အံ့အားသင့်စေပြီးအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုရရှိလိမ့်မည်။
အရောင်များများများစားစားတွေ့နိုင်လေ၊ အသစ် QM32DUI-60HZ မော်နီတာတွင်အလွန်ကျယ်ပြန့်သော 99% sRGB အရောင်အဆင်းနှင့် 10-bit အရောင်များပါဝင်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောဂိမ်းအတွေ့အကြုံအတွက်ထူးခြား။ အသေးစိတ်ပုံရိပ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။.
IPS ၏ပြသမှုသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သင့်အားမြင်ကွင်းကျယ်ထောင့်ပေါင်း ၁၇၈/၁၇၈ ဒီဂရီအထိပေးသောကြောင့်၎င်းကိုမည်သည့်ထောင့်မှန်မှမကြည့်နိုင်ပါ။ ပုံမှန် TN panel များနှင့်မတူဘဲ IPS display များသည်သင့်အားထင်ရှားသောအရောင်များဖြင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်များကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဝက်ဘ်ရှာဖွေခြင်းများအတွက်သာမကအရောင်၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အမြဲတမ်းတောက်ပမှုလိုအပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Freesync နှင့် Gsync
AMD Freesync နည်းပညာနှင့် Nvidia Gsync တို့သည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ပုံရိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ ကျိုးပဲ့နေခြင်းနှင့်ပြတ်တောက်သောဂိမ်းကစားခြင်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှုန်းမြင့်မားစွာဖြင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေရန် QM32DUI-60HZ သည်ကစားသမား၏အိပ်မက်မော်နီတာဖြစ်သည်။.
မည်သည့်အလင်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆိုမျက်စိ strain ကိုလျှော့ချရန် မျက်စိကိုကာကွယ်ပြီးအပြာရောင်အလင်းမှ strain ကိုကာကွယ်ပါ
Flicker Free နည်းပညာသည်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားသောဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်မျက်စိ strain ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် screen-flicker ကိုလျော့ချပေးသည်
crosshair overlay သည်ကွဲပြားသော crosshair options ၄ ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်လက်ရှိကစားနေသည့်သေနတ်သမားနှင့်အသင့်တော်ဆုံးသော option ကိုရွေးနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ မော်ဒယ်: OG34RWA-165Hz